Order မှာယူလို့ရနေပြီဖြစ်တဲ့ OnePlus6– AsiaApps
May 23, 2018 May 23, 2018 MoonSmartphone NewsNo Comment on Order မှာယူလို့ရနေပြီဖြစ်တဲ့ OnePlus 6
ကင်မရာ အရမ်းကောင်းတယ်လို့နာမည်ကြီးနေတဲ့ OnePlus6ကို order မှာလို့ရနေပြီနော်။ Order ဘယ်လိုမှာရမလဲဆိုတာလေးကို အောက်မှာဖော်ပြပေးသွားပါမယ်။
အခုနှစ် ၂၀၁၈ မှာ ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ လူစိတ်ဝင်စားမှုမြင့်နေတဲ့ ဖုန်းအမျိုးအစားတွေထဲမှာ OnePlus6 လည်း တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ အခြား Android ဖုန်းတွေလိုပဲသူမှာ လည်း မျက်နှာပြင်ကို ပိုကျယ်စေတဲ့ Notch ပါဝင်ပါတယ်။ ဖုန်းရဲ့ အရောင်တွေအဖြစ် အနက်ရောင် ကာလာ နှစ်မျိုးနဲ့ limited edition အဖြူရောင် ကာလာ တစ်မျိုးကို ဖြန့်ချီမယ်လို့သိရပါတယ်။ မော်ဒယ် ၃မျိုး စလုံးရဲ့ နောက်ကျောဘက်က မှန်သားဖြစ်ပါတယ်။ Wireless charging ကိုတော့ အသုံးမပြုနိုင်ဘူးလို့သိရပါတယ်။
ဘယ်အချိန်မှာ order မှာလို့ရပြီလဲ???
OnePlus6ရဲ့ midnight black, နဲ့ mirror black ကို အခု မှာယူလို့ရနေပါပြီ။ Limited edition ဖြစ်တဲ့ Silk white မော်ဒယ်ကိုတော့ လာမယ့် ဇွန်လ၅ ရက်နေ့မှ မှာနိုင်မယ်လို့ သိရပါတယ်။ OnePlus6ကို တိုက်ရိုက်မှာယူချင်ရင်တော့ OnePlus.com (website) မှာသွားရောက်မှာယူနိုင်ပါတယ်။ ကုမ္ပဏီဘက်ကနေတစ်ဆင့် Amazon လို သက်ဆိုင်ရာ ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးရောင်းချပေးသွားမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ဖုန်းတွေကိုတော့ ကိုယ်စားလှယ် sale website တွေဆီ မဖြန့်ရသေးဘူးလို့ကြားတဲ့အတွက် မှာယူပြီး လက်ထဲရောက်ဖို့ အချိန်နည်းနည်းလောက် ထပ်စောင့် ရမယ်ထင်ပါတယ်။
ဈေးနှုန်းတွေကတော့ အရောင် ၃ မျိုး၊ memory & storage ၃ မျိုး အပေါ် မူတည်ပြီး ကွာခြားသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ ဈေးနှုန်းလေးတွေကို အောက်မှာ အမျိုးအစားအလိုက် ပြပေးထားပါတယ်။
Model US UK Australia (converted)
Midnight black (8GB/128GB $579 £519 AU$770
OnePlus6လည်း order မှာယူလို့ရနေပြီဆိုတော့ သူ့ကို ဝယ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိရင် အရင်ဆုံး သုံးရအောင် ခုပဲ ပြေး order မှာထားလိုက်တော့နော်။ ဈေးနှုန်းတွေကတော့ အပေါ်မှာတွေ့တဲ့အတိုင်း လေထဲမှာမြောက်နေပါတယ်။(?) Asiaapps ကတော့ ဈေးနှုန်းမြောက်မြောက် OnePlus6ကို စတိုင်မိုက်မိုက် ကိုင်ချင်သူတွေ အတွက် စောစောစီးစီးသုံးလို့ရအောင် လက်တို့ပေးပြီးပြီနော်…